Chitupa chekuremekedza - Hebei Chenli Rigging Group Co, Ltd.
Chenli anotenda zvakasimba kuti kusimudzira ndiyo nheyo yakakwana. Isu tinotora musika sekutungamira, nehunyanzvi kunowedzera kukwikwidza mukana, nepo mukana wehunyanzvi wakanangana wakakura-mushe uye top-grade.so Chenli sapota kuedza kusimudzira zvigadzirwa nekuvandudza zvigadzirwa zvemhando, shingairira kuve mukuru webling sling mugadziri muChina, kuitira kuti utenge zvinhu zvakasvibirira muhuwandu, chengetedza mutengo, udzikise mutengo, upedze mutengo wakakura wevatengi nekukurumidza.
Chenli akawana ISO9001, CE, GS, CCS, zvitupa, izvo zvisina kujairika muindasitiri imwechete iyoyo. Zvichakadaro yedu PICC inishuwarenzi inokwenenzvera RMB2000000 zvigadzirwa inishuwarenzi gore rega. Kana paine tsaona dzakakonzerwa nezvigadzirwa zvedu zveChenli, unogona kufonera 95518 uye PICC kambani ichagadzirisa dambudziko iri pakutanga. Chokwadi ndechekuti chenli haisati yatambira kunyunyuta kusvika ikozvino.
Kubata kwedu kushanda kunoita kutiita kwakakura. Chenli anotengesa vakawanda vane tarenda vanhu vane hunyanzvi pakutsvagisa, maneja uye musika. Wese munhu ane kodzero yakakodzera yekusimudzira kugona kwavo. Izvo zvinoverengera bhizinesi rinotsvaga chimwe kana zviviri zvitsva zvigadzirwa gore rega. Iye zvino Chenli haangopi zvigadzirwa chete asi anobatsirawo vatengi kugadzira chirongwa uye rubatsiro rwehunyanzvi.
Paimisikidza kambani, Chenli akaziva kuti pakusimudza zvigadzirwa, kuchengetedzeka ndicho chinhu chakanyanya kukosha kana uchishandisa.so Chenli anogara achiisa capital capital kuti aongorore zvigadzirwa pasina kufunga nezve mutengo.Zvino tine zvemhando yepamusoro zvigadzirwa zvinoshandiswa kuyedza. mbishi zvinhu, kudzora chigadzirwa kugadzira, kuyedza kusawirirana. Kuendesa kunze zvigadzirwa zvedu zvese hazvina hanya.
mapurovhinzi akagadzikana emabhizinesi
Kudza chibvumirano uye kukudza chipikirwa